Mukati memakwikwi aNick naVanessa Lachey 'DWTS' - Macelebs
Mukati maNick naVanessa Lachey's 'Kutamba Nenyeredzi' Makwikwi
Nekuti Nick Lachey , kukwikwidzana nemukadzi Vanessa Lachey pa 'Kutamba Nenyeredzi' kunonetsa.
Bruce Glikas / Getty Mifananidzo
Pamwaka 25 kuratidzwa kweABC show, Vanessa akarova Nick nemapoinzi matatu. Sevamwe vavo, Maks Chmerkovskiy naPeta Murgatroyd, vakaroorawo, Maks anosekwa , 'Izvi hazvina hutano kumhuri.'
Uye kuita kuti zvinhu zvinyanye kuomarara kune aimbove 98 Degrees crooner, haasi iye chete ari kupikisana nemukadzi wake, ari kunzwawo kumanikidzwa kubva pakuti hama yake, Drew Lachey, akaendesa kumba kwake kwaaishuvira Mirrorball Trophy panguva yemwaka wechipiri wekuratidzira.
'Ini ndinogona chete kusunga Drew kana ndikahwina chinhu chose, uye ndinofanira kutora mudzimai wangu mukuita, saka iyi haisi mamiriro ekukunda kwandiri,' baba vevatatu vakaseka.
Kana iwe uchifunga kuti Nick ane muganho pamusoro pemukadzi wake wemakore matanhatu nekuda kwechikwata chake chekare uye achave ari Lachey wepamusoro mwaka uno, funga zvakare 'Kutamba kunoita kuti ndinzwe kusagadzikana kupfuura chero chinhu muhupenyu,' akadaro ane makore makumi mana nematatu. '98 Degrees yaive isiri kutamba mukomana bhendi. '
Zvichakadaro, Vanessa anoita kunge anoda mukana wekutamba pachiratidziro. 'Ndinoita zvese muhupenyu hwangu kuvana vangu uye nemurume wangu, asi uyu mukana kwandiri wekuti ndizviitire chimwe chinhu,' akadaro ane makore makumi matatu nematatu. 'Izvi ndezvedu! … Mhamha vari kudzosera garo rake. '
Pakupedzisira, kunyangwe nemakwikwi avo, vaviri vacho vane mwero wepamusoro wekuremekedzana uye kukoshesana.
'Ndanga ndichifunga kuti amai vayiuraya,' Nick akataura nezvaVanessa Cha Cha . 'Akazunungusa chinhu chose.' Uye Vanessa akamurova zvekare, achimhanya, 'Imi varume munoshamisa! Uye ndinosvika kumba neizvozvo manheru ano. '
Larry Birkhead anogovera Anna Nicole Smith ndangariro, zvinyorwa zvisingawanzo
Millie Bobby Brown anotyora kneecap yake, anodzima kutaridzika kweMTV
chii chiri kuitwa catt sadler izvozvi